Qabqablayaasha oo dacwad ka wada maxkamadda sare - BBC News Somali
Qabqablayaasha oo dacwad ka wada maxkamadda sare
Image caption Xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa laga ilaaliyay hogaamiye kooxeedyadii dalka
Maxkamadda sare ayaa dib u dhigtay dacwad ku saabsanayd xubno doonayay inay ku biiraan baarlamanka cusub oo ay dib usoo celiyeen gudiga farsamada, kadib kulan ka dhacay xarunta maxkamada ee magaalada Muqdisho.
Fadhiga maxkamada waxaa soo xaadiray xubnaha dacwada soo gudbiyay oo u badan hogaamiye kooxeedyadii hore ee soomaaliya iyo qareenada u doodayay iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamada sare abuukato Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf, waxaa hoolka maxkamada ka maqnaa gudiga la soo eedeeyay.
Gudoomiyaha maxkamada sare Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf oo ka hadlayay fadhiga ayaa ku dhawaaqay inuu dib u dhigay go'aan ka gaarista dacwadan isagoo sheegay inay socdaan wadahadalo siyaasadeed oo lagu doonayo in arintaasi lagu xaliyo ilaa caawa haddii taasi ay dhici waysana ay maxkamadu barito go'aan qaadan doonto.
Cumar Maxamed Maxamuud Finish oo mar kamid ahaa hogaamiye kooxeedyada ugu tunka waynaa muqdisho kana mid ah xubnaha laga hor istaagay galitaanka baarlamanka cusub oo la hadlayay BBC ayaa sheegay inuu ku qanacsanyahay go'aanka dib u dhigista ee maxkamada.
Qareenka u doodaya xubnaha dacwada soo oogay Cabdirashiid Shiikh Siciid oo ku sugnaa hoolka maxkamada ayaa sheegay inay tahay mid sharci ah dacwada ay soo gudbiyeen shakhsiyaadka loo diiday baarlamanka iyadoo lagu eedaynayo inay galeen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha.
Waxaa socda wadahadlo lagu doonayo in xal looga gaaro arintan oo aad u murgisay geedi socodka loogu jiro in lagu soo gabgabeeyo xiliga kmg ah ee uu dalku kusoo jiray dhawr iyo tobankii sano ee ugu danbeeyay, waxaase muuqata waqtiga oo aad u kooban dartii iyo gudaga farsamada ee soo xulida baarlamanka oo waqtigoodu dhamaanayo in laga gaari waayo xal waafi ah oo dhinacyada oo dhan qanciya.